नेपाल आज | रेखा, ३ बर्ष भइसक्यो । सन्तान कहिले जन्माउने ?
शनिबार, ०८ जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
रेखा थापा नेपालकी सबैभन्दा बढी रुचाइएकी व्यक्ति हुन् । सामाजिक संजाल फेसबुकको पेजलाई आधार मान्ने हो भने उनलाई टक्कर दिन अरुका लागि सहज छैन । झण्डै २७ लाखले उनलाई फेसबुकमा पछ्याइरहेका छन् । उमेरले उनी धेरै भएकी छैनन् । ३४ हाराहारीकी भइन् । तर पछिल्लो समय उनी निरन्तर लोकप्रियताको उचाइं र चर्चाको केन्द्रमा छिन् । कान्तिपुरले छनौट गरेको लोकप्रिय व्यक्तिको सूचीमा उनले सबैलाई पछि पारिन् । नेताभन्दापनि अघि देखिइन् उनी ।
संर्घषको यात्रा सहिद क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको सन्ततिका रुपमा रेखा आफुलाई चिनाउछिन् । क्षेत्रिय बंशकी उनी वर्णव्यवश्थालाई आधार मान्ने हो भने जातैले लडाकु स्वभाविक छिन् । मोरङबाट काठमाडौंसम्मको छोटो यात्रामा उनले मै हुं भन्ने कैयौंलाई उनले पछि पारिसकेकी छन् । १९९९ को मिस नेपालमा उनी टप टेन भित्र पर्न सफल भइन । त्यसयता उनलाई पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन । छबिराज ओझाको फिल्म हिरोबाट डेब्यू गरेकी उनी पछिल्लो समयमा नेपाली फिल्मकी हिरो नायिकाका रुपमा स्थापित छन् ।
वैवाहि सम्बन्धमा उतारचढाव
हिरोमा स्थान दिएका छबिराज ओझाको जीबनकै स्थान लिइन् रेखाले । ओझासंग १० बर्ष संगै रहिन् । सम्बन्ध सहज रहन सकेन । उनले सम्बन्ध तोडिदिइन् । जीबनसाथीको सम्बन्ध तोडिएपनि उनले ओझासंगको मित्रवत्सम्बन्ध भने तोडेकी छैनन् । भन्छिन्,‘छबि मेरो लोग्नेका रुपमा रहन सकेन, तर मेरो करिअरको देबताको रुपमा सधैं पूज्य रहनेछ ।’ छबिसंगको सम्बन्धविच्छेदपछि उनी आमासंग बस्दै आएकी छन् ।
निसन्तान रुपवान रेखालाई चाहने धेरै छन् । त्यसमाथि उनी नम्बर वान हिरो नायिका । उनको विहेको चर्चा भइरहन्छ । उनी आफैंले पनि चर्चा चलाइदिन्छिन् । पछिल्लो समय एउटा स्टाटस लेखिन् । हुनै लागेको विहे तोडिएको भनेर । त्यसभन्दा अघि राजेशपायल राईसंग उनको विहे हुने चर्चा निकै चलेको थियो । सोही प्रकृतिका समाचारलाई उनले सेयरसमेत गरेपछि सोको पुष्टि भएको ठानिएको थियो ।
सन्तान कहिले? रेखा विवाद्स्पत अभिव्यक्तिका लागि पनि परिचित पात्र हुन् । तीन बर्ष अघि उनले विहे नगरेपनि सृष्टिलाई निरन्तरता दिने भन्दै अन्र्तवार्ता दिएकी थिइन् । दर्शकले रेखाको नयां रेखा चाहेको आफुलाई अवगत रहेको र सोका लागि विहे गर्नैपर्ने भन्ने नरहेको उनको प्रष्टिकरण थियो । उनले वैवाहिक जीबन नभएपनि आफु जीबनसाथीको पर्खाइमा रहेको जनाएकी थिइन् । बिना बाबुको सन्तान जन्माउने रेखाको ईच्छा भनि अर्थाइएको सो अन्र्तवार्ताको पनि तीन बर्ष भइसकेको छ । तर, रेखाले न बिहे गरेकी छन् नत सन्तान नै जन्माएकी छन् । रेखालाई धेरैले सोध्छन्,‘बिहे कहिले ? सन्तान कहिले ?’ सृष्टिप्रतिको चाहना सार्वजनिक गरेकोपनि ३ बर्ष भइसक्यो ।
विवादस्पत अभिव्यक्ति र गतिविधि विहे नगरेपनि सन्तान जन्माउने उनको अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमा मसलाको विषय बन्यो । उनले आफुलाई वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरिन्ः टेष्टट्युव वेवी सम्भव छ भन्दै । तर, अहिलेसम्म उनले टेष्टट्युव प्रविधिको प्रयोग भने गरेकी छैनन् ।
उनी आफुमात्रै विवादमा परिनन् । भुमिगत सशस्त्र संर्घष हुंदै सार्वजनिक राजनीतिमा आएका प्रचण्डलाई सडकमै नचाइदिइन् । माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको भन्दै आन्दोलन छेडेको थियो । सडकमा हजारौं मानिस उतारेको थियो । प्रचण्ड स्वंय सडक आन्दोलनमा सहभागी थिए । रेखा थापालगायतका कलाकार प्रचण्ड–आन्दोलनमा साथ दिन सडकमै पुगे । नांचगानसहितको नौलो आन्दोलनमा रेखापनि नाचिन । प्रचण्डलाईपनि नचाइदिइन् । नांच्न त प्रचण्ड एकैछिन नांचेका थिए तर सो नांचका बारेमा बर्षौपछिसम्म स्पष्टिकरण दिन उनी बाध्य छन् । पत्रकारलाई चड्कन पत्रकारलाई सित्तिमित्ति मान्छे जाइलाग्दैनन् । तर, रेखाले पत्रकारलाईपनि छोडिनन् । गाइजात्राका सन्र्दभमा एउटा मनोवाद छापिएको थियो रेखा थापाको । पत्रकार स्वंयले रेखा बनेर काल्पनिक लेख लेखेका थिए । उनले लेखमा प्रयोग गरिएको भाषा र सन्र्दभले आफ्नो प्रतिष्ठामा आंच आएको भन्दै लेखक पत्रकारलाई चड्कन लगाइदिइन् । भन्छिन्, ‘जस्तालाई तस्तै ढिढोलाई निस्तै ।’
विवादमा पोशाक रेखा थापालाई देखा थापा भनेर ओलोचना गर्नेपनि छन् । तर, उनी पोशाकको मर्म नबुझेकाले सो आरोप लगाउने बताउछिन् । उनी सार्वजनिकरुपमै चुनौति दिन्छिन्, ‘मैले कुनै अश्लिल दृश्य चलचित्रमा देखाएको भए प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस् ।’ उनले राममन्त्र लेखिएको कोरा कपडा पहिरिएर कामुक नृत्य गरिन् चलचित्रमा । धर्म विरोधी भनि उनको आलोचना गरियो । उनले काग कराउंदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छजस्तो गरिदिइन् । विवाद निम्त्याउने तर विवादको पछि नलाग्ने उनको स्वभाव छ ।
विवादमा राजनीति संविधानसभाको दाश्रो निर्वाचन ताका एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरिन् । टिकटपनि पाइन । तर, मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाएकाले उनी उम्मेदवार हुन पाइनन् । राजनीतिको सामान्य ज्ञानसमेत नलिई राजनीतिमा लागेको भनि उनको आलोचना भयो । निर्वाचनमा माओवादी बढारियो । उनी चुनावी प्रचारमा विभिन्न ठाऊं पुग्दा माओवादी कमजोर रहेको आभाष गरिसकेकी थिइन् । नेताहरुलाई सुझाइन्, ‘यो निर्वाचन माओवादीको पक्षमा हुनेछैन ।’ बाबुराम भट्टराईलाई फोनमै कहिन अवश्था । तर, उनको कुरा कसैले सुनेन । चुनावपछि उनी राजनीतिक गतिविधिमा उतिसारो लागेकी छैनन् ।
कुनैबेला उनीलाई राजेश हमालसंग फोटो खिच्न मन थियो । हमालले रुची देखाएनन् । पछि उनीपनि चर्चित भइन । हमालसंग फोटो खिच्ने ईच्छा देखाइनन् । सो प्रसंगले पनि फिल्मी दुनियांमा तहल्का पिट्यो । फिल्म अवार्ड खुब जितिन् रेखाले । तर, अवार्डमै राजनीति हुन थालेको भेउ पाइन् विस्तारै । अवार्ड नै नलिने घोषणा गरिदिइन । चलचित्र विकास बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष पप्पुसंग उनको नाम जोडियो । उनले सार्वजनिकरुपमै प्रश्न गरिन्,‘आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तिसंग मेरो संगत भयो त के विग्रियो ? संगतमाथि शंका गर्ने तिमीहरु को ?’ उनका चलचित्र नारीप्रधान हुने गर्छन । मुख्य भुमिकामा उनी आफैं हुन्छिन् । दुष्ट नास गर्नका लागि बाहुबली पुरुष चाहिने परम्परागत दृष्टिकोणका विरोधमा उत्रिइन् रेखा । काली, रामप्यारी, हिम्मतवालीलगायतका चलचित्रमा उनी एक्सन रोलमा प्रस्तुत भइन ।
रेखा कटु अभिव्यक्तिका लागि परिचित छिन् । अमेरिकामा रहेका नेपालीको मन बिझाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भनि उनको खेदो खनियो । उनी आफ्नो अभिव्यक्ति बंगाइएको दाबी गर्छिन । ‘अमेरिका सोचेजस्तो सहज छैन । त्यहां आफुले रेष्टुरेन्टमा अमेरिकन भिखारीसमेत देखेको थिए । यहीं कुरा भनेको बंग्याइयो ।’ उनको प्रष्टिकरण छ । छबि र उनको सम्बन्ध विच्छेदपछि उनीमाथि धेरै टिका टिप्पणी भयो । उनले सार्वजनिकरुपमा भनिदिइन्, ‘श्रीमती मरेको ६ महिना नबित्दै जन्ती लिएर बिहे गर्ने पुरुष यहां छयाप्छयाप्ती छन् । प्रश्न भने महिलालाईमात्र तेर्साइन्छ ।’
हरिबंश आचार्यले पुर्नविवाह गरेको बखतमा आएको रेखाको यो अभिव्यक्तिले कलाक्षेत्रमा छेप्यास्त्रजस्तै बन्न पुग्यो । रेखा रोकिइनन् । सोझै भनिदिइन् ‘छबि की त म तेस्री श्रीमती थिए, मेरो लागि उ पहिलो श्रीमान थियो । उसले श्रीमती किन रिझाउन सक्दैन भनेर कहिल्यै प्रश्न गर्दैनन् । श्रीमान् रिझाउन नसक्ने भनेर मेरो भने आलोचना गर्ने ?’ (यहां प्रयोग भएका तस्विर र दृश्य इन्टरनेटबाट लिइएका हुन् )